Kedu ka mmanu mmanu si eme ka aru mmadu di ike? - Ogwu - 2020
Ogwu: eji, uru bara uru na contraindications
Akwukwo ajuju - osisi ma o bu osisi ohia ma obu osisi shrub, nke ohia Oleaceae. E nwere ụdị dịgasị iche nke acidic. Otu akụkụ nke osisi, atọ, anọ, ma ọ bụ ise-lobed na elongated cuttings dị ugbu a, a na-apịa ha n'okpuru nrụpụta ngwaọrụ, na-echebe site na mmiri ozuzo na anwụ na-achasi ike.
Kislitsy nwere uto tart pụrụ iche, nke gosipụtara n'ihi oke elu nke oxalic acid. Osisi Kislitsy nwere ike ịnweta ụdị nke kachasị mma na onyinyo.
Ebe a na-ekesa bụ spruce ọhịa nke Russia, South na Latin America, Africa. Na mba ụfọdụ, na ezighi ezi, a na-ewere ọtụtụ ụdị Kyslitsy dịka ahịhịa (mmanụ aṅụ).
Healing Njirimara Kislitsy
Nchịkọta na nchekwa nke ngwaọrụ ọgwụ si acido
Ntughari nke ọgwụ si acidic medicine na folk ọgwụ
Broth iji sachaa na angina
Efere na akwa okpomọkụ
Tincture maka ọrịa akụrụ na urinary tract
Tincture nke compresses na rheumatism na bruises
Ihe ọṅụṅụ na mmanụ aṅụ maka afọ ọsịsa na usoro nsị
Ihe omimi nke acid
Osisi nwere ihe dị ịrịba ama nke vitamin: ascorbic acid (92 mg / 100 g), vitamin K, rutin, flavonoids, phenolic asịd na tocopherols. A hụrụ acids organic na epupụta - oxalic, amba, fumaric, tartaric, citric. Ọnụnọ ha bụ ihe kpatara uto uto na epupụta.
Ị ma? Kislitsa nwere ike ịmalite akwụkwọ, jiri nwayọọ nwayọọ na-emetụ aka, karịa ichetara mimosa.
Ihe ndi sayensi gosipụtara iji me ka ikike nke acidic gastric bebacids, mee ka agụụ rie ihe, osisi nwere ihe diuretic na choleretic. Otú ọ dị, nkà mmụta ọgwụ ochie na-ekpughe ọtụtụ ohere iji rite uru na ya. A na-ekwu ya na diuretic, mgbochi mkpali, anthelmintic, ọrịa na-agwọ ọrịa, gwara ndụmọdụ iji gbochie hypo-na avitaminosis, hyperacid gastritis na anorexia.
Ogwugwu na-enye aka na-agwọ ọrịa ọrịa imeju, nephritis, nrekasi obi, bụ onye na-eme ka ike gwụọ ọrịa Medicinal decoctions nke acidic ga-enwe mmetụta ịgwọ ọrịa na scrofula na ọbụna ọrịa afọ, tincture ga-anagide ọrịa afọ, stomatitis, abscesses, diathesis, disabolic disorders. Ihe ha ji eme ihe ga-enwe mmetụta dị mma n'ahụ ọrịa ndị na-egbuke egbuke, ọrịa ndị helminthic, tonsillitis, suppurations gingival, ulcers, enuresis; ihe ọṅụṅụ ahụ ga-ebelata okpomọkụ, gwọọ ọnyá ahụ, mee ka ahụ mgbu ahụ, dị ka ndị Bulgarian na ndị Russia na-agwọ ọrịa na-agba akaebe, ga-eme ka obi sie ike. Na Caucasus, iji akwụkwọ eme ihe dị ka nkwụsị nke arsenic na nsị Mercury bụ ewu.
Ị ma? Na mgbakwunye na mmetụta ahụike, a pụrụ iri onye na-eri anụ site na-agbakwụnye ya akwụkwọ ka ọ bụrụ salads, soups, pies. A na-atụ aro ndị hụrụ Tea ka ha rie ihe ọṅụṅụ na-egbuke egbuke.
Ahịhịa na epupụta nke nkịtị oxalite nwere ọtụtụ ihe bara uru, ya mere, a na-echekwa ha dị ka ihe ndị na-agwọ ọgwụ n'oge oge okooko osisi - oge site na April ruo June. A na-akụ osisi ahụ n'okpuru ebe a na-ekpuchi ya na ezigbo ventilashị; a pụkwara iji ihe ọkụkụ pụrụ iche mee ihe maka nke a (okpomọkụ ekwesịghị ịdịru 45-50 ° C). A na-agbaze ihe ndị a kụrụ nke ọma n'ime obere ọdọ ma chekwaa ihe karịrị otu afọ kwụsịtụrụ n'ime ụlọ akọrọ ma ọ bụ na akpa akpa akwụkwọ.
Oké akpịrị bụ ajọ ọrịa nke nwere ike ijide mmadụ ọ bụla. Ọ dịghị mkpa ịga ozugbo na ọgwụ ahịa maka ọgwụ. A na-achọpụta mmapụta nke ndị acidic nkịtị maka ịmalite. Iji mee ya, ọ na-ewe 2 teaspoons wụsa 200 ml nke mmiri dị ọcha, obụpde ma na-ahapụ ka esi nri na stovu maka nkeji 10. Mgbe obi jụrụ gị mmiri, gbanye ma gbakwunye mmiri mmiri iji weghachi isi olu. Were ugboro atọ kwa ụbọchị tupu nri.
A maara na ọrịa na-agwụ agwụ na-akawanye njọ ịmalite ịrịa ọrịa ahụ. Na antipyretic Njirimara nke Kislitsy ekwe ka ọ na-eji maka oyi na flu. Ntucha nke kislitsa na elu okpomọkụ dị mfe: 1 tablespoon nke herbs wunye 180 ml nke mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ ma na-ahapụ na mmiri bath nke 30 nkeji. Dị ka decoction maka akpịrị akpịrị, ọ dị mkpa ka ị rie ihe ọkara otu awa tupu nri ugboro atọ n'ụbọchị.
Ụdị na-adịghị mma, ịṅụbiga mmanya ókè, ịṅụ sịga, ịṅụ mmanya, ọrịa hypothermia bụ ihe kpatara ọrịa akụrụ, na E. coli, chlamydia, mycoplasma - urinary tract. Ọgwụ ndị mmadụ na-edebere tincture n'ọnọdụ ndị yiri ya. Tinye otu tablespoon nke epupụta epupụta na 400 ml nke mmiri ọkụ, weta obụpde ma na-etinye na mmiri bath na nnukwu akara enamel nnukwu efere maka ihe dị ka nkeji 15, mgbe ahụ, na-akụ site na atọ triple gauze. Na-aṅụ ọkara otu iko ugboro atọ n'ụbọchị na nri. Na-ejikwa ịṅụ mmanya na-aba n'anya nke acidic, nke ga-anagide ọrịa nrịanya na ọrịa imeju: 50 ml wunye 200 ml vodka, na-esi ọnwụ banyere otu izu ma buru n'ime tupu iri nri ugboro abụọ n'ụbọchị.
Rheumatism na-eme onwe ya ka ọ bụrụ ihe si na mbufe ọrịa streptococcal, dịka ọnya akpịrị, dị ka mmeghachi omume na-adịghị na-akpata ma ọ bụ ọdịdị mkpụrụ ndụ. Na-eji obere ihe mgbochi bekee. Kwadebe ihe ọṅụṅụ mmanya dị otú ahụ: 50 g nke epupụta kwesịrị wụsara ya na 500 ml nke vodka, hapụrụ ebe gbara ọchịchịrị ruo ụbọchị 10, dochie ma jiri mkpịsị na-egbu mgbu na ọnyá, ha na-etinye aka na anụ ahụ emetụta.
Ọ dị mkpa! Ogwugwu ga-abụ panacea maka stomatitis, naanị mgbe acidic na mmiri kwesịrị ịdị 1: 1.
Ịṅụbiga mmanya ókè, ịrịa afọ, nrụgide na-adịgide adịgide, eriri afọ na nlezianya nke ahụ na ọgwụ nje na-eme ka afọ ọsịsa mee ka ị ghara ịchọta ihe na-adịghị mma. Ghichaa ihe ọṅụṅụ ahụ site n'akụkụ ndị dị n'elu n'elu akụkụ ahụ na-egbuke egbuke na mix ya na mmanụ aṅụ na ihe ruru 1: 1. Were 1 tablespoon ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
Na mgbakwunye na mmetụta ọgwụgwọ, ọgwụ a nwere ọtụtụ ihe ndị na-emechi ahụ. Ya mere, maka ndị nwere gout, akụrụ na akụrụ imeju, ọrịa cirrhosis, ọbara na-adịghị ike, oxaluria, ọ dị ize ndụ iri acidic.
Ọ dị mkpa! Tụkwasị na nke a, ndị ọzọ ekwesịghị ichefu na acid oxides nwere nsị na-adịghị ike, n'ihi ya, ọ ga-ewere dị ka dọkịta kwuru.
Ya mere, ị na-adọrọ uche gaa na Kislitsu nke dị nro na-adịghị mma, ihe ndị bara uru ya na njigide ya, ị ga-ahụ ngwá ọrụ dị mkpa iji mee ka ahụike gị dị mma na iwepụ ọrịa dịgasị iche iche.